As of Fri, 14 Aug, 2020 05:20
वनका राजाको मासिक आम्दानी २५ हजार
विश्वव्यापीकरणको प्रभाव मानवीय जीवनशैलीमा पर्दै गएको छ । परम्परागत पेशा, व्यवसायमा व्यवसायीकरण भएको छ भने पेशा परिवर्तन पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।
डेढ वर्षभित्र रक्तसञ्चार भवन निर्माण हुने
डेढ वर्षभित्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण हुने भएको छ । भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र नेरेसोबीच सोमबार दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
७० वर्षको उमेरमा सुन्तला खेती
स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका–५ अर्चलेका ७० वर्षीय रुद्रबहादुर मल्लले यस वर्ष सुन्तला खेतीबाट २ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । मल्लले साँढे २ दशकदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् ।
माछापालनसँगै तरकारी खेती
तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाका किसानले गाउँगाउँमा पोखरी निर्माण गरेर माछापालन गर्दै आएका छन् । खोलामा खेर गइरहेको पानीलाई पोखरीमा संंकलन गरी माछापालनका साथै तरकारी खेतीमा सिँचाइसमेत गर्दै आएका छन । गाउँ–गाउँका साथै घर घरमा किसानले एक घर एक पोखरी निर्माण अभियान सुरु गरेका छन् ।
छाडेर जागिर भैंसीपालन
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१४ गढीका एक दम्पत्तिले जागिर छाडेर भैंसीपालन व्यवसाय अंगालेका छन् । गढी राम्रीकाँडाका डिलबहादुर र गंगा खत्रीले व्यावसायिक रूपमा भैंसी पालन सुरु गरेका हुन् ।
अझै एक साता बढी चिसो
अझै एक सातासम्म बढी चिसो रहने मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले जानकारी दिएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम शून्य डिग्री सेल्सिियसमा झरेपछि उपत्यकामा चिसो बढ्दै गएको छ ।
डा. गोविन्द केसी अनशनस्थलबाटै पक्राउ
सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको मुद्दामा वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजालसले सोमबार अवहेलनाको मुद्दामा केसीलाई मंगलबार बिहान अदालतमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
चिसो बढेसँगै अस्पतालमा बिरामी बढे
चिसो बढेसँगै रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने समस्याले अस्पताल जाने बिरामी बढ्न थालेका छन् । स्वास्थ्यमा छिटो समस्या हुने भएकाले यसबाट बच्न र रुघाखोकीलाई बेवास्ता नगर्न पनि चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।
कालीकोट घटनामा विप्लवका कार्यकर्ताको घूसपैठ: प्रतिवेदन
गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको मृत्यु हुनेगरी भएको ‘कालीकोट झडप प्रकरण’मा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहको घूसपैठ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. मानबहदुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले विप्लवका कार्यकर्ताको उक्साहटमा म्यादी प्रहरी आन्दोलनमा उत्रिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
चिराइतोको मूल्य घट्दा किसान चिन्तित
जडिबुटीको चिराइतोको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेपछि पाँचथरका चिराइतो उत्पादक किसान चिन्तित बनेका छन् । पूर्वका उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिराइतोले मूल्य नपाएपछि चिराइतो किसान चिन्तामा परेका हुन् । अघिल्लो वर्षदेखि मूल्यमा आएको भारी गिरावटसँगै चिराइतो कारोबारमा समस्या आएको किसानहरू बताउँछन् ।
चन्द्रनिगाहपुरका होटलको वर्गीकरण
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर राजमार्गमा रहेका होटलको वर्गीकरण गरेर स्टिकर टाँसेको छ । विभिन्न ५० वटा सूकचांकका आधारमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका होटलहरूमा स्टिकर टाँस गरिएको हो ।
महिलालाई च्याउ खेतीसम्बन्धी तालिम
कालिकोटका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन च्याउ खेतीसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । ग्रामीण महिलालाई उद्यमी बनाउन ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको आयोजना र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तालिम दिइएको हो ।
चिसोका कारण रौतहटमा तीनको मृत्यु
केही दिनदेखि शितलहरसँगै बढेको चिसोका कारण रौतहटमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नं. ४ का ५५ वर्षिय महर्जन ठाकुर हजाम, राजदेवी नगरपालिका वडा नं. ७ मुडवलवाका ७५ वर्षिय अयोधी राय यादव र गढीमाई नगरपालिका १ स्थित चिमनी भट्टामा काम गर्न आएका सर्लाहीका ५६ वर्षिय नेक महम्मद अलीको मृत्यु भएको हो ।
७ नाकामा अध्यागमन कार्यालय राख्न गृहकार्य
सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणतर्फका ७ नाकामा अध्यागमन कार्यालय राख्न गृहकार्य थालेको छ । विदेशी नागरिकका गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण तथा अध्यागमन तथ्यांक व्यवस्थित गर्न इलामको पशुपतिनगरदेखि पर्साको ठोरीसम्मका आधा दर्जन नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
स्वच्छ हावामा सास फेर्न माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन
धुलोधुवाँले आक्रान्त भएका नागरिकले राजधानीको कोटेश्वरमा शनिबार प्रतीकात्मक नाटक प्रदर्शन गरेका छन् । ह्यासट्याग स्वच्छ हावा, वायु प्रदूषण विरुद्धको नागरिक अभियानले कोटेश्वरमा ब्यानर र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै स्वच्छ हावाको माग गरेका हुन् । प्रदर्शनीमा चिकित्सक, विद्यार्थी, विभिन्न पेसाकर्मी सहभागी थिए ।